DHUGUMAAREE LAATA?-Bakkasaa Tumsaa Ittaanaa – Beekan Guluma Erena
DHUGUMAAREE LAATA?-Bakkasaa Tumsaa Ittaanaa	Beekan Erena
Poems June 11, 2016
60SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
Akkam jirtu lammiiwwankoo kan keessaaf alaa? Kanneen dirree qabsoo dhugaafi mana hidhaa jirtan bakkuma sanatti nageenyi kiyya isin ha dhaqqabdun jedha.
Egaa nagaan hiituu dacheef samii waan taateef hin hafinii jenna malee erga sammuuf namummaan dhukkubsachuu eegallee jaarraa darbineerra.
Hammi dhugaa dheebote ni ciniinsifata.
Kaan ammoo afaan waraabessaa fi harree odeessa.
“Kan garaa malee kan maqaa yoom nu dhibeefi ani duunaan margi hin margin” isa jedhame sana jechuu kooti.
Gaariidha har’aaf hundumtuu karaa mataasaa ha gulufu!
Bor guyyaan ifatti salphataniif ulfaatan waan dhufuuf!
Nutis kanumaaf obsinee hanga guyyaa har’aa teenye!
Yeroon gara yaada kootti deebi’uu gidduu kana waa laman gammade!
1. Waa’ee hidhamuu obbo Zalaalem Jamaanee yoo ta’u,
kanan nan gammade jedheefis isaaf osoo hin taane warra dhaabbiitti du’an xumurri isaanii mul’achuu eegaluusaati.
“Nyaadhuu nyaadhuu gara firakeetti garagalii liqimsi” jedha oromoon!
Akkasumas kan hamma jaal’atan hin beekne adaraa du’a kootii jetti jedhu!
Anis kanan jedheef jarreen maqaa oromoo uummata kabajamaa ofitti maxxansuun isaaf dhaabbanne. Isaaf hojjenna jedhan garuu ergama diinaa lammiisaanii irratti raawwatan qeequuf jedheeni.
Kun mataadha! Ammayyuu as ba’uutti jira!
Yeroosaatu yeroo dhiigni sagalee godhatee dacheerraa gara waaqaatti iyyeedha.
Maaliifis hin iyyuree?
Dhiiga daa’imaatiif dhiiga haadha ulfaan jirtuutihoo!
Egaa akkuma aamma tokkummaa lallabachuutti jirru kanatti ha jabaannuu! Wal ha dhageenyu,waliif ha amanamnuun dhaamsa kooti!
Dhimmikoo an kaasuuf jedhe inni lammafaaf ijoon waa’ee garee guddaa akkasumas kaayyoo qalbii nama hawwatu qabatee ijaaramuuf eegalameeti!
Garee “OROMO YOUNG CREATIVE” jedhu kan Abdiisaa Bancaa Jaarraan durfamuufi xiinxaltoota akkasumas namoota ogummaa gara garaa gahumsaan qaban kan haammate yoo ta’u.
Kaayyoo isaatu garaa na hammeesse! Dhugumaa laata na jechisiise.
Maaliif yoo jettan kaayyoo hundeeffama isaatu waan ana keessaa burqe natti fakkaate!
Ana qofas miti! Kanneen na fakkaatan rakkina wal fakkaataas qabnu ni haammata.
Akkuma namoota muraasa waliin wal beeknuu fi toora marsaariitii adda adda irratti hamma beekumsakoo aartii sabakoof bu’aa qaba jedhee kanan yaade katabaan ture!
Ammas katabaan jira! Hangan du’uttis anaaf imaanaa dhiigaan natti kenname waan ta’ef kanan haalaan irraa seesu miti!
Egaa amma kitaabilee narka taa’anii halkaniif guyyaa boqonnaa na dhowwaniif gareen kun deebiidha naan jedha!
An faayidaa dhuunfaa barbaaduu osoo hin taane mana jireenyakoo dachee oromiyaa godhadhee,. Sooratakoos biqiloota dugadasheerraa margan abdadhee garuu namummaakoo dhugaan waanan qabu mara hojjechuun kaayyookooti!
Kanaafis kitaabilee asoosamaa sadii baadhee waggoota afurii ol lakkoofsiseera!
Garuu osoon dhamaatiikoo gurra sabaan hin ga’iniyyuu aarsaa kaffaluu eegaleera!
Garuu kun hamilee akka nan cabsineef fakkeenya jaallan darbanii kudhaama seenaa godhadhee mormatti rarraafadheera!
Egaa kanan jechuu barbaades garichatti miseensomee dirqama natti kennamu bahuu waanan barbaadeef namootni dhimmichi isin ilaallatu dirqama lammummaa akka baatan jedheen galfata isinitti kennadha!!!!!
hawwiinkoo dhuguumee inni ani baadhu!
Akka nama tokkoo yoom kanan boqodhu!
Ciniinsuukoos fixee harkarratti baadhee.
Kayyoo bara dheeraa ijakoon daawwadhe.
Gaafas maalan jedha maaluman dubbadha.
Hargansuukoo dhiisee aara nan galfadhaa?
Imalli an eegale karaatti dhaabbataa??
Kaayyoon garee kanaa dhugumaaree laata?
Bakkasaa Tumsaa Ittaanaa
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa60SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← CARRAA DUKKANOOFTUU Asoosama Kutaa 1ffaa-Rabbumaa Geetachoo Guddataa’tiin
Diraamaa Oromo “Edipas Mooticha,”Oedipus the king” Afaan Oromoon →